အွန်လိုင်းကနေ ကျောင်းတက်နေပေမယ့် မျက်လုံးလေးတွေ မထိခိုက်ရလေအောင် | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ပထမဆုံးအနေနဲ့ အွန်လိုင်းကနေ ကျောင်းတက်နေတဲ့ ကလေးတိုင်း ပြုလုပ်သင့်တဲ့ မျက်လုံးလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကတော့ -
1. ကလေးကို မျက်လုံးအပေါ်အောက် ကြည့်ခိုင်းပါ။ မျက်လုံးကို အပေါ်မျက်နှာကြက်ကို ကြည့်ခိုင်းပါ၊ ခဏအကြာ အောက်ကြမ်းပြင်ကို ကြည့်ခိုင်းပါ။ ဒီလိုမျိုး ၁၀ ခါလောက် လုပ်ပါစေ။
2. အခုလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ ကလေးတွေအကြိုက်ပါ။ ကလေးကို မျက်လုံးကို စိတ်ကြိုက်လှုပ်ပါစေ။ မျက်လုံးကို တစ်စောင်း၊ မြွေလိမ်မြွေကောက်၊ 8 ပုံစံ စသဖြင့် မျိုးစုံကိုအခါ ၁၀-၂၀ လောက် လုပ်ခိုင်းပါ။ မျက်လုံးကိုပဲ လှုပ်ခိုင်းပါ။ ခေါင်း မလှုပ်ပါစေနဲ့။
3. မျက်လုံးအမြင်ပြောင်းတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကို ပြုလုပ်ပေးခြင်းကလည်း မျက်လုံးကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ အဝေးကအရာတစ်ခုကို စူးစိုက်ပြီးနောက် အနီးကအရာတစ်ခုကို ပြောင်းကြည့်ရတာပါ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို ၁၀ ကြိမ်လောက် ပြုလုပ်ပေးပါ။
အလွယ်တကူပြောရမယ်ဆိုရင် ကလေးကို လက်ကိုရှေ့ဆန့်ထားစေပြီး လက်မ ဒါမှမဟုတ် လက်ညှိုး ထောင်ထားခိုင်းပါ။ ပြီးရင် အမြင်ကို အဝေးကပန်းချီကား ဒါမှမဟုတ် အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကို အာရုံစူးစိုက်စေပြီးနောက် ထောင်ထားတဲ့လက်ကို ကြည့်ခိုင်းပါ။
4. ကြိုးမှာ ဘောလုံးချည်ပြီး လွှဲလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ကလေးကို ခေါင်းမလှုပ်ဘဲ ဘောလုံးလှုပ်တာကို လိုက်ကြည့်ခိုင်းပါ။
မျက်လုံးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာအပြင် မျက်လုံးနားတစ်ဝိုက်ကို နှိပ်နယ်ပေးပါ။ လည်ပင်းလေးကိုပါ နှိပ်နယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ မျက်လုံးမှိတ်ပြီး မျက်ခွံလေးကို နှိပ်နယ်ပေးတာ၊ မျက်လုံးလေးကို အသာအယာ ဖိဖိပေးတာမျိုးတွေကိုလည်း လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေကို လိုက်နာကျင့်သုံးနေဖို့လည်း -
● ကလေး စာဖတ်နေစဉ်၊ စာလုပ်နေစဉ်မှာ အလင်းကောင်းကောင်းရပါစေ။
● စာသင်ချိန်ကလွဲပြီး ကွန်ပျူတာတွေ၊ ဖုန်းတွေကို အကြာကြီး မသုံးပါစေနဲ့။ မျက်လုံးကို အနားပေးပေးပါ။
● ကလေး ကောင်းကောင်းအိပ်ရေးဝပြီး အနားရပါစေ။ မျက်လုံး ကောင်းကောင်းအနားရဖို့ကလည်း အမြင်အာရုံအတွက် အရေးပါပါတယ်။
● မျက်စိဆရာဝန်နဲ့လည်း မှန်မှန်စမ်းသပ်မှု ခံယူပါ။